Fool-koollada ED ee ugu Fiican ee Soo-saaraha iyo Warshadda Li-ion Battery (Laba-dhalaalaya) Civen
Qalabka biraha ee elektrolytigga ah ee baytariyada lithium waa bireed naxaas ah oo ay soo saartay oo ay soo saartay CIVEN METAL gaar ahaan warshadaha soosaarka baytariyada lithium. Foilkan naxaasta ah ee elektrolytigga ah wuxuu leeyahay faa'iidooyinka daahirsanaanta sare, nijaasta hoose, dhammaystirka dusha sare, dusha fidsan, xiisadda labiska, iyo dahaarka fudud. Iyada oo leh daahirnimo sare iyo biyo -biyood wanaagsan, foil -kabka naxaasta ee elektrolytigga ah ee baytariyada ayaa si wax ku ool ah u kordhin kara waqtiyada lacag -bixinta iyo siideynta waxayna fidin kartaa nolosha wareegga baytariyada. Isla mar ahaantaana, METAL CIVEN wuu jeexi karaa iyadoo la raacayo shuruudaha macmiilka si loo daboolo baahiyaha maaddada macmiilka ee badeecadaha batteriga ee kala duwan.
CIVEN waxay bixin kartaa bireedka naxaasta ah ee lithium-ka indhaha oo dhinacyo kala duwan leh laga bilaabo 4.5 ilaa 20µm dhumucda magacaaban.
Badeecaduhu waxay leeyihiin astaamaha qaab-dhismeedka laba-geesoodka ah, cufnaanta birta ee u dhow cufnaanta aragtiyeed ee naxaas, astaanta dusha sare oo aad u hooseysa, fidinta sare iyo xoogga gilgilka (eeg Shaxda 1).
Waxaa loo isticmaali karaa sida side anode iyo ururiyaha baytariyada lithium-ion.
Marka la barbardhigo xaashida naxaasta lithium-ka guud ee dhinac-dhinac ah iyo dhinac-dhinac ahba, aagga xiriirkeedu aad buu u kordhaa marka lagu xidho walxaha elektaroonka xun, taas oo si weyn u yareyn karta iska-caabbinta xiriirka ka dhexeeya ururiyaha elektaroonka xun iyo maaddada elektaroonka xun iyo hagaajinta simmetry ee qaab-dhismeedka xaashida koronto ee taban ee baytariyada lithium-ion. Dhanka kale, bireedka naxaasta ah ee lithium copper-ka ah wuxuu leeyahay iska caabin fiican oo qabowga iyo fidinta kuleylka, iyo xaashida koronto ee taban ma fududa in la jebiyo inta lagu guda jiro xukun iyo sii deynta batteriga, taasoo sii dheereyn karta nolosha adeegga batteriga.
Shaxda 1. Waxqabadka
Xoogga Giraanta (25 ℃)
Fidinta (25 ℃)
Mawjada ama laalaabkii
Ballaca≤40mm hal ogol
Ballaca≤30mm mid baa oggolaanaya
Ma jiro maro, xoqid, wasakheyn, qayilo, midab -beddel iyo wixii la mid ah iyadoo la adeegsanayo
Dabayshu markay u jeeddo dhinaca SMarka xiisadda qaloocsan ee xasiloon, ma jirto dhacdo duubnaan dabacsan.
Fiiro gaar ah: 1. Waxqabadka iska -caabbinta oksaydhka biraha iyo tusmada cufnaanta dusha ayaa laga gorgortami karaa.
2. Tusaha waxqabadka wuxuu ku xiran yahay habka imtixaankeena.
3. Muddada dammaanadda tayada waa 90 maalmood laga bilaabo taariikhda la helay.
Hore: ED Coils Foils for Li-ion Battery (Laba-matte)
Xiga: HTE Foils Copper Electrodeposited for PCB